Imeziwanye Ogo Ogugu gi: Ebumnuche sitere na ihe omuma
SEO mpaghara anaghịzi arụ ọrụ na ịmepụta saịtị gị naanị. Ọ na-agụnye ịkwagidemmekọrịta dị mma na ebe ịntanetị na inwe njikọ siri ike n'ịntanetị site na ebe nrụọrụ weebụ na mgbasa ozi gị. Ndi oru mgbasa ozi nwereghọọ ebe zuru okè maka mmekọrịta gị na ndị ahịa gị - sofa entsorgen.
N'afọ 2009, Google malitere ịrụ ọrụ na ijikọta data gbasara mgbasa ozi na nchịkọta ọchụchọ yaalgorithm. Nke a pụtara na ị jikọta ebe nrụọrụ weebụ na ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ dị ka Facebook, Twitter na Instagram ga-eme ka ị nwekwuo njikọna nleta nleta. N'ihi ya, a ga-ahọrọ saịtị gị elu.
Maka azụmahịa ndị obodo, ihe niile akọwapụtara gụnyere oge ọrụ, ụbọchị, na ịnye ọnụahịakwesịrị ịdị ruo ụbọchị. Njikwa Ihe Nlekọta Ahịa nke Ọcha ,Frank Abagnale na-enye echiche ndị ga - enyere gị aka imeziwanye ebe nrụọrụ weebụ gị na mgbasa ozi mgbasa ozi ka ị wee nwee ike ịbawanye elu na ogo
1. Tinye Blog gaa na weebụsaịtị gị
Blog dị mkpa maka weebụsaịtị ọ bụla. Jiri ya ka ịdee ozi ọhụrụ banyerengwaahịa gị na ọrụ gị, ndị ahịa gị na obodo gị. Iji mee mkparịta ụka ahụ, tụlee echiche ndị na-esonụ.
Tinye foto na akụkọ banyere ndị ahịa nke na-eguzosi ike n'ihe nye azụmahịa gị
Jụọ ndị ahịa banyere ahụmịhe ha na aro ha ka ha mezie ọrụ gị.Mgbe nke a gasịrị, bipụta nyocha na foto na blog gị. Nweta ikikere tupu ị kwasaa. Dee akụkọ banyere ụdị mgbasa ozi dị iche ichenyiwe ma nye njikọ gị blog. Nke a bụ ụzọ dị mma isi soro ndị ahịa gị. Ha ga-enwe ekele maka ya.
Foto Foto nke azụmahịa gị n'oge dị iche iche
Dee foto n'oge na-akọwa hanhazi mgbasa ozi ma nyekwa njikọ na saịtị gị. Jiri foto iji melite Google My Business, Yahoo na mpaghara foto Bing.
Njirimara otu ngwaahịa ma ọ bụ ntinye
Ime nke a na-enye aka na-enyere ndị ahịa gị aka imelite banyere ọrụ gị.
Dee Akụkọ Ọjọọ Maka Akụkọ Gị
Ka anyị kwuo na ị bụ onye na-ehicha ọkụ, na-ede banyere uwe dị ọcha nke ị sacha. Deeakụkọ banyere otú ejiji ahụ ruru unyi na na. Azụmahịa anaghị echefu 'akụkọ egwu'. Chọọ otu ma biputa ya na blog gịwee kesaa ya na mgbasa ozi mgbasaozi.
2. Jikọọ na Ndị Na-amịpụta Ndị Si Obodo Gị
Jiri akwukwo mgbasa ozi nke ndi mmadu na ndi mmadu a ma ama dika ndi amara n'obodo gi.Soro ha na -ekere site na ịkekọrịta ozi ha. Ndị a nwere ike inyere aka ịzụ ahịa na ọrụ gị. Mgbe ha zaghachina okwu gị wdg, ụfọdụ ndị nwere ike ịhụ ya dị ka nkwado.
3. Mee Gaa na Nri Posts
Mgbe ị mepụtara ihe na-aga n'ihu na mgbasa ozi ọha mmadụ, ọtụtụ ndị ga-enwe mmasina azụmahịa gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Ndị mmadụ ga-amalite na-achọ azụmahịa gị na search engines ga-amata ya dị ka a rụpụtara.
4. Jikọọ na Obodo Ịntanetị Gị
Jiri ihe ime obodo iji jikọta na obodo gị. Dee banyere ihe na-eme na mpaghara gịna mgbasa ozi mgbasa ozi na blog. O yiri ka ndị na-agbapụ ga-ekekọrịta ọrụ ndị na-eme ka ọtụtụ ndị mara azụmahịa / ụlọ ọrụ gị. I nwekwara ike tinye mpagharaememme kalenda na ebe nrụọrụ weebụ gị. Hụ na ọ na-emelite mgbe niile.
N'ihi na mpaghara SEO ga-enwe ọganihu, bulie ya maka ọkwa dị elu na engines ọchụchọ nawee mepụta ọdịnaya ọhụrụ maka blog na mgbasa ozi mgbasa ozi. Ijikọta ndị ahịa na mgbasa ozi mgbasa ozi na-eduga n'ịzụ ahịa dị elu na saịtị gịya mere ọ bụ ọkwa dị elu na engines ọchụchọ.